ညောင်ရွှေမှာ ကော်ဖီဆိုင်လှလှလေးထိုင်ပြီး စက်ဘီးစီးကြမယ်…. – YANGON STYLE
ညောင်ရွှေမှာ ကော်ဖီဆိုင်လှလှလေးထိုင်ပြီး စက်ဘီးစီးကြမယ်….
ညောင်ရွှေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အင်းလေးကန်ကြီးကိုပဲ ပြေးမြင်ကြတယ်မလား?? ဒီတစ်ခါတော့ အင်းလေးကန်ကြီးကို အပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လှလှလေးမှာ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ပြီး ကော်ဖီဆိုင်မှာပဲ Bike Tour package လေးပါတစ်ခါတည်း တွဲထားပေးတော့ အိုကေမှာ စိုပြေနေရောလေ။ ဓာတ်ပုံရိုက် အနားယူပြီးတာနဲ့ ညောင်ရွှေရဲ့ ရွာတွေထဲမှာ လယ်ကွင်းတွေကိုဖြတ်ပြီး စက်ဘီးစီးကြမယ်။
Coffee House By Pleasant Garden
TD တို့ညောင်ရွှေသွားရင် မြို့ထဲနဲ့ အင်းထဲကိုပဲသွားတာများကြတယ်လေ။ ဒီလိုကော်ဖီဆိုင်လှလှလေးမှာ ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်သောက်ရင်း အေးအေးဆေးဆေး အနားယူဖို့တော့မေ့နေကြတယ်မလား။ တခါလာလည်း ယောက်ယက်ခက်ပီး အင်းထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်သွားကြတာများတယ်။ ထားပါတော့ ကော်ဖီဆိုင်လေးကို TD နဲ့အတူ ခဏလောက်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်
ကော်ဖီဆိုင်လေးက ညောင်ရွှေမြို့ထဲကနေဆို ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲသွားရတယ်။ သူက တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာ ဆောက်ထားတာ။ ပြီးတော့ ရှိသေးတယ် ကော်ဖီဆိုင်မှာ TD အကြိုက်ဆုံးနေရာကတော့ အပေါ်ထပ်က ခုံတန်းလေးပေါ့။ ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်သောက်ရင်း ဟိုးရှေ့မှာရှိနေတဲ့ အင်းလေးကန်ကြီးကို ထိုင်ငေးနေရတာလောက်မိုက်တာ မရှိဘူး။ ရှိသေးတယ် ဓာတ်ဖမ်းမယ့်သူတွေအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်စရာနေရာလေးတွေ အများကြီးလုပ်ထားပေးတယ်လေ။ ဘာလီမှာလိုပုံစံမျိုးတွေ၊ ဒန်းတွေလဲရှိတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အကြိုက်ပေါ့။ နောက်တစ်ခုရှိတာက ဆိုင်နောက်မှာ သဘာဝတောင်ကျရေနဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ ရေကူးကန်တစ်ခုလုပ်နေတယ်။ အခုတော့မပြီးသေးဘူး။ ရေကူးကန်ပြီးရင်တော့ရှယ်ပဲ အလကားကူးလို့ရမှာတဲ့
ကိုယ်တွေသွားတုန်းကတော့ မပြီးသေးဘူး။ အော် ဒါနဲ့ဆိုင်မှာ ကော်ဖီတစ်မျိုးတည်းရတာမဟုတ်ဖူးနော်။ အစားအသောက်တွေကလည်းရှယ်ပဲ။ ဝိုင်လည်းရသေးတော့ ညနေစောင်းဆို ဝိုင်ခွက်လေးနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းရင်း သောက်လို့ရတာပေါ့။ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရတာပျင်းတယ် ဓာတ်ပုံတွေလည်းရိုက်ပြီးပြီဆိုရင် ဆိုင်မှာ Bike Tour Package မေးကြည့်ပြီး စက်ဘီးစီးလို့ရပါသေးတယ်​။​
ကာလာတောက်တောက်လေးတွေဝတ်ပီး ဓာတ်ပုံရိုက် မိုက်
ဝိုင်လေးတစ်ခွက်နဲ့ ညနေခင်းဆို သာယာ
အအီပြေ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်လေးနဲ့ မနက်စာလေးဟာ ပြီးပြည့်စုံ
ကိုယ်တွေလို အဆွေးတစ်လိုင်းအတွက်တော့ ပြောမနေနဲ့
အဲ့ဒ်ီ Handmade coffeeကြိတ်စက်လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင် ကော်ဖီကြိတ်လို့ရတယ်
သနပ်ခါးလိမ်းဖို့ မှန်နဲ့ သနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ပါချထားပေးတယ်
ဒီနေရာလေးသဘောကျလို့ Gate of heaven
စက်ဘီးစီးမယ်ဆို မနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်း ၂ ချိန်ရွေးလို့ရပါတယ်။ ညနေပိုင်းကိုတော့ ပိုပြီး Recommend ပေးပါတယ်။ နေဝင်ချိန်လေးကြည့် စက်ဘီးလေးနင်းရင်းပေါ့။ Bike Tour မှာ အစားသောက်ရော စက်ဘီး​ရောပါပီးသားကိုမှ ရှစ်ထောင်ပဲပေးရတယ်။ ကဲ ဘယ်လောက်တန်လဲ
ကော်ဖီဆိုင်ကနေစထွက်ပြီး စပါးခင်းစိမ်းစိမ်းကြီးတွေ၊ ဝါးတောလမ်းတွေထဲ လေတစ်ဖြူးဖြူးနဲ့ စက်ဘီးစီးရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူး။ စက်ဘီးတွေကလဲ နင်းရတာတော်တော်အဆင်ပြေ၊ ဂီယာတွေဘာတွေလဲ ချိန်ထားပီးသားဆိုတော့ တော်တော်မိုက်တယ်။ လမ်းပြ Guide ကလဲတူတူလိုက်ပေးပြီး ဓာတ်ပုံတွေလည်းရိုက်ပေးတယ် ဆိုတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။ စက်ဘီးစီးမယ်ဆိုရင် ရေဘူးနဲ့ ဦးထုပ်လဲပေးသေးတော့ Biker စတိုင်အပြည့်နဲ့ ရှိုးထုတ်လို့လဲရသေးတယ်
TD ကတော့ ညောင်ရွှေရောက်ရင် စက်ဘီးလေးနဲ့တော့ လျှောက်လည်ကြည့်စေချင်တယ်။ Being normal is so boring လေနော်။ လှေပဲစီးမနေပဲ မိုးရာသီ စိမ်းစိုနေတဲ့ ညောင်ရွှေရဲ့အလှကို စက်ဘီးလေးစီးပြီးတော့လည်း ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်။ TDကတော့ ပုံတွေနဲနဲ နည်းတယ် ကယက်စီးပြီး စက်ဘီးတန်းစီးခဲ့တော့ အရမ်းပင်ပန်းပြီး နေရာစုံအောင်မနင်းနိုင်ခဲ့လို့ပါ။စက်ဘီးစီးတာအပြင် နောက်ထပ် Inle Horse Club မှာ မြင်းသွားစီးလို့လည်းရသေးတယ်။ မြင်းစီးတဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့ နောက်ထပ် Blog တစ်ခုသပ်သပ်ထပ်ရေးပေးဦးမှာမို့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်။ ကော်ဖီဆိုင်လိပ်စာမသိတဲ့သူတွေအတွက်လဲ ပုံထဲမှာ လမ်းညွှန်မြေပုံလေး ထည့်ထားပေးတယ်နော်
ဆိုင်ကနေ စက်ဘီး စထွက်ဖို့အစမ်းနင်းကြည့်
ဆိုင်ကစထွက်မယ်ဆိုရင် ဘရိတ်လေးတော့သေချာအုပ်နော် ဂုန်းဆင်းလေးတွေက စတာမလို့
ညောင်ရွှေက ရွာတွေထဲကနေ ပတ်တော့တာပဲ
ဒီ View ကအပြင်မှာပိုလှတယ်
နောက်က ဝါးရုံတောကြီးနားမှာလဲ စက်ဘီးရပ်ပီး ဓာတ်ဖမ်းခဲ့နော်
နောက်မှာ နဂါးမောက်ခင်းတွေရှိတယ် အသီးသီးချိန်ဆို ဆိုင်က လက်ဆောင်တွေထည့်ပေးတယ်တဲ့
Bike Tour Link
အင်းထဲမှာ ကယက်စီးချင်တဲ့သူတွေအတွက် ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Instagram မှာလဲ Follow လုပ်ပြီး Travel Photo တွေစောင့်ကြည့်လိူ့ရတယ်နော်။
IG – https://instagram.com/aye_thader_hlaing?igshid=coehds93o0ii